ဗေဒင် ဖူး စာ – Grab Love Story
လေပြေ ရယ် လေပြေ့သူငယ်ချင်း သုံးယောက်ရယ် ..ဗေဒင်သွားမေးကြတယ်လေအ့မှဲာ . ဗေဒင်က လေပြေ့ကို ဘယ်လိုယတြာချေခိုင်းလဲသိလား..လမ်းမှာ ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အကျီင်္ခရမ်းရောင်ဝတ်ထားတဲ့ကောင်လေး တစ်ယောက်ကို .. ရည်းစားစကားလိုက်ပြောပါတဲ့ .. လေပြေကတည်းခပ်ပြောင်ပြောင်ဆိုတော့လေပြေ ဗေဒင်မေးတ့ဆဲီကနေ စထက်ွလာကတည်းကခရမ်းရောင် ၀တ်တဲ့ ကောင်လေးကိုလိုက်ရှာတော့တာပါပဲ ဒါပေမယ့်လေ . အချိန်တွေသာကြာသွားတယ် . ခရမ်းရောင် ၀တ်တဲ့ ကောင်လေး တစ်ယောက်မှကိုတေ့ွေ သးဘူး.အဲ့ဒါနဲ့စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ .. လေပြေ ကန်ဘောင်မှာ သွားထိုင်မယ် ဆိုပီးတော့ . သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ကန်ဘောင်သွားတယ် .ကန်ဘောင်မှာ ထိုင်နေရင်း နာရီဝက်လောက်နေတော့ . ခရမ်းရောင်လေးနဲ့ သူ့ကို စတွေ့တာပေါ့ ..အသားဖြူဖြူ .အရပ်အနေတော် . ပုံစံ ခပ်မိုက်မိုက်နဲ့.. လေပြေလည်းဒါနဲ့ .. သူ့နောက်ကလေးကိုအသာလိုက်သွားပီးတော့ . ရည်းစားစကားပြောတော့တာပါပဲ ..
ဒါပေမယ့် .. သူကလေ လှုပ်တောင်မလှုပ်ဘူး ကြာတော့လေပြေလည်း ..တော်တော်လေးတင်းလာတာနဲ့ .“ကိုယ်တော်ချော ..ရှင့်ကိုယ်ရှင် ဘာများထင်နေလဲ . ဒီမှာကြိုက်လွန်းလို့ပြောနေတယ်များထင်နေလား.ဗေဒင်က လုပ်ခိုင်းလို့ “ ဆိုတော့ သူက ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ .“ဒီက အစ်မကို ကျနော်က ယဉ်ယဉ်လေးရူးနေတယ်ထင်နေတာ ဆောရီး နော် . ခင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရပါတယ် .ကျနော့်ဖုန်းနံပါတ်က ၀၉-၂၆၈… ညကျ ဆက်လိုက်ပေါ့ ..”ဆိုပီးတော့ ထွက်သွားပါလေရော .. လေပြေလည်း ကြောင်ပီးတော့ ရပ်နေမိတယ် .ပီးမှ . စိတ်တိုလိုက်တာမှလွန်ပါရော..ညကျရင်တော့ ဖုန်းထဲကနေ ကောင်းကောင်းဆဲပစ်ရဦးမယ် .. စိတ်ကူးရင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့တော့တယ်ဒါနဲ့ ကျမ ကိုယ်ကျမ ကောင်းကောင်းမိတ်မဆက်ရသေးဘူးနော် ကျမ နာမည်က လေပြေတဲ့..ဒဂုံ တက္ကသိုလ် အီးမေဂျာ ဒုတိယနှစ်တက်နေတာ ..အသက်ကတော့ ၁၉ ရှိပီရှင့် လေပြေတို့က ရှမ်းနည်းနည်းစပ်တယ် .အဲ့ဒီတော့ လူတွေပြောကြတာ အသားအရေ အရမ်းလှတယ်တဲ့ . ကြွားလက်စနဲ့ ကြွားလိုက်ပါဦးမယ် လေပြေ့ကိုဆို ကျောင်းမှာ မသိတ့သဲူမရှိဘူး. တစ်ကျောင်းလုံး ကွင်း လို့တောင်မှ ..လေပြေ့ကို ပြောကြတယ် . ဒါပေမယ့်လေပြေက ခပ်ပြောင်ပြောင်ပဲ နေတာ .ကျောင်းမှာဆို . လေပြေ့ကို ရည်းစားစကားလိုက်ပြောတဲ့သူတွေက များတယ် .
ဘယ်သူ့ကိုမှစဉ်းစားခ့ဖဲူးတာမဟုတ်ဘူး အကုန်လုံးကို လက်သီးနဲ့ထိုးလွှတ်တာ ..သူတို့က လေပြေ့ကိုတကယ်ချစ်လို့မဟုတ်ဘူး လေပြေ့ရဲ့ လမ်းလျှောက်တိုင်း တုန်တုန်သွားတဲ့ ဖင်ရယ် .လေပြေ့ရဲ့ အကျီင်္ထ ကဲ ရုန်းထက်ွတော့မယ် ထင်ရတဲ့ ရင်ရယ် . ခါးကျင်ကျင်လေးရယ်ကို .တဏှာစိတ်တေနွဲ့ . ချစ်နေကြတာ လေပြေသိတာပေါ့ . အဲ့ဒါကြောင့်လည်း တစ်ယောက်ကိုမှစိတ်မ၀င်စားတာလေ . ဒါပေမယ့် သူနဲ့တွေ့ပီးကတည်းက လေပြေ့စိတ်ထဲမှာမသိမသာစိတ်ဝင်စားခ့တဲာကို လေပြေကိုယ်တိုင် ..သတိမထားမိခဲ့တာပါ လေပြေ အိမ်ရောက်တော့ . သူ့အကြောင်းစဉ်းစားမိတယ် . အိမ်ရောက်မှမဟုတ်ပါဘူးတစ်လမ်းလုံးစဉ်းစားလာခ့တဲာ.သူ့ပုံစံလေးကို .သူ့ပုံစံက မိုက်တယ် . သန့်သန့်လေးတစ်ခုသတိထားမိတာက . သူစကားပြောတဲ့ပုံစံလေး . ရန်ကုန်သားမဟုတ်သလိုပဲ တခြားနယ်တစ်ခုခုက ထင်တယ် . လေပြေထင်တာကတော့ ရွှေမန်းသားလေးထင်ပါရဲ့ဒါနဲ့ လေပြေ့တစ်ကိုယ်လုံးလည်း နံစော်နေပီ တစ်နေ့လုံးလည်ထားတာလေ ရေချိုးလိုက်ပါဦးမယ် လေပြေ အပေါ်က အင်္ကျီ ကြယ်သီးလေးကို တစ်လုံးချင်းဖြုတ်လိုက်တော့ဝင်းဝါတဲ့ အသားအရေန့အဲ တူ လည်ပင်းသား ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးက ပေါ်လာတယ် ..
ကြယ်သီးလေးတွေအကုန်ဖြုတ်ပီး . ချွတ်လိုက်ပီးတော့ .အိမ်က ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ရှေ့မှာကြည့်ကြည့်လိုက်တယ် လေပြေ့ရဲ့ အသားအရေလေးနဲ့ . ၀တ်ထားတဲ့ ဘရာစီယာပန်းရောင်လေးက . လိုက်နေတာပဲ ပီးတော့ဘရာစီယာထဲက ရုန်းထွက်တော့မယ့်အလားစနေနှစ်ခိုင်က . လေပြေကိုယ်တိုင် ကျင့်ထားရတာလေ . ၃၄ ဘီ ဆိုဒ်လောက်တော့ရှိမယ် လေပြေ့သူငယ်ချင်း ကောင်လေးတစ်ယောက်ပြောဖူးလို့ ကောင်လေးတွေက .. ရင်သားထွားတဲ့ကောင်မလေးတွေဆိုရင် ပိုပီးတော့ ကြိုက်ကြတယ်တဲ့ .ဘရာလေးကို ချွတ်လိုက်တယ် လုံးမို့နေတာပဲ လေပြေ့ရင်သားတွေက အပြစ်ပြောစရာကိုမရှိဘူး နို့သီးခေါင်းလေးတွေကပန်းရောင်လေးတွေ ထနေတာပဲ.အပျိုလေးမလို့ထင်ပါရဲ့ သေးသေးလေးတွေရယ် ခေါင်းလေးတွေကလေပြေကိုင်ကြည့်လိုက်တော့ ဘာမဆိုညာမဆိုင် သူ့ကို သွားသတိရတယ် .သူသာ ဒီလိုလေးကိုင်လိုက်ရင် အားးးဘာလို့ သူ့ကိုပဲ သတိရနေရတာလဲ စိတ်ညစ်ပါရဲ့ . ဒီလောက်ကိုယ့်ကိုကောသွားတဲ့ ကောင်ကို . ရေချိုးပီးရင်တော့ ဖုန်းဆက်ပီး ဆဲရမယ် . အဲ့ကောင်ကို .အဲ့ဒါမှ မှတ်မှာ ဒီလိုန့ပဲလေပြေရေချိုးခန်းထဲဝင်ပီးတော့ ရေချိုးလိုက်တာပေါ့ ..လေပြေ ရေချိုးရင်းနဲ့ . ကိုယ့်ရဲ့ ရတနာလေးကို သေချာ ဆေးနေမိတယ် . အစိလေးကို ကိုင်ကြည့်တော့ ကျင်တက်သွားတာပဲ .ဒါနဲ့ နည်းနည်းပွတ်လိုက်တယ် ဒီအချိန်မှာ သွားသတိရမိတာက . စာဖတ်နေတဲ့ ကိုကိုတို့လည်း သိလောက်ပါပီနော် သူ့ကိုပဲ သတိရသွားပြန်တယ် .
“အားး နင်နော် ငါက ဗေဒင်က လုပ်ခိုင်းလို့လုပ်ရတာပါဆို ”“ဟီိဟိ ဗေဒင်က လုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုလည်း ဘာလို့ ကျနော့်မှ လာပီးတော့ လုပ်တာလည်းဗျ”“ခရမ်းရောင်ဝတ်တ့ေဲ ကာင်လေးမှ လုပ်ရမှာလေ” “အော် အ့လဲိုလား ဟုတ်ပါပီ နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဟင်..”“လေပြေ မင်းနာမည်ရော..”“ဟိန်းလေး.ဒါနဲ့ ကျနော်က ၁၈နှစ် .. လေပြေရော”“မောင်လေးပေါ့ ..ခစ်ခစ် လေပြေက၁၉ပါရှင် ”“မ လို့ပဲ ခေါ်မယ်နော် ”“ရပါတယ် မင်းကိုလည်း ဟိန်းလို့ပဲခေါ်မယ်နော် အိုကေ?”“မ.. ကျနော်က မန်းလေးက အလည်လာတာ ရန်ကုန်ကို နောက် ၅ ရက်လောက်ဆို ပြန်တော့မှာ”“တကယ် ဒါဆို မနက်ဖြန်ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုသွားစားရအောင်လေ .. ” သူကလည်း ငြင်းရှာတယ် “ဟုတ်” တဲ့.ထပ်ပီးတော့ လေပြေ သူနဲ့ ဖုန်းပြောတာ ကြာကြီးပဲ ..လေပြေမသိလိုက်တာကတော့ . ဒီလိုမျိုးရင်းနှီးမှုလေးက အစပြုခဲ့တာဟာ လေပြေ့ရဲ့ အပျိုစင်ဘ၀လေးပီးဆုံးသွားဖို့ ဆိုတာပါပဲ .လေပြေလေးလေ . သူ့ကိုချိန်းသာချိန်းလိုက်ရတာ .. သူရောက်လာပါ့မလားမသိပါဘူး .. လေပြေလေးလေ . သူ့ကို ချစ်များချစ်မိပီလား မသိဘူးနော် ဒါပေမယ့် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး တစ်ခေါက်လေးတွေ့ပီးတော့ ချစ်သွားဖို့ဆိုတာ .ဒီလိုတွေးနေတုန်းမှာ ..သူရောက်လာတယ် .လေပြေလေ သူ့ကိုငေးနေရင်းနဲ့..အချိန်တွေတောင် ရပ်သွားသလားတောင်ထင်ရတယ်သူ့ရဲ့ တစ်လှမ်းချင်း လေပြေ့ဆီကို လျှောက်လာပုံကို မျက်လုံးထဲကကိုမထွက်တော့ပါဘူး ..
“မ .. စောင့်နေရတာကြာပီလား .”“ကြာသေးပါဘူး ဟိန်းရယ် ခုလေးတင်ရောက်တာ”“မ ရယ် ညာပီ ဒီမှာ ကော်ဖီတောင် အေးနေပီကို ဆောရီးနော် ကားကြပ်နေလို့..”“အင်းပါ မန်းလေးသားလေးရဲ့တော်ပါသေးတယ်အခုရောက်လာတာကိုပဲ ” “ဟဟ.. မ .. ဟိန်းကိုလေ.. ရွှေတိဂုံ လိုက်ပို့ပေးနော် .. မရောက်သေးလို့..”“ဟုတ်လား လိုက်ပို့ပေးမှာပေါ့ ဟိန်းက ပုဆိုးဝတ်လာတာကိုး ဒါကြောင့်”“အင်း .. ဟုတ်တယ် ဘုရားသွားမှာမလို့လေ..ပီးတော့ . ”“ပီးတော့ ဘာဖြစ်လဲ .. ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးထားလိုက်တော့ .. သွားမယ် ”ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ သူန့အဲ တူ ဘုရားအတူရှိခိုးခဲ့တဲ့ အချိန်လေးတွေ လေပြေ အခုထိသတိရနေဆဲပါပဲ ..သူလေ လေပြေ့ကို ခိုးခိုးကြည့်တယ် .သိလား အရမ်းပဲဆိုးတာပဲ . သူ ခိုးကြည့်လိုက်တိုင်း လေပြေ့မှာလေ နှလုံးတွေတုန်လိုက်တာသူရယ် လေပြေသိလိုက်ပါပီ သူ့ကို အရမ်းချစ်မိနေပီ ဆိုတာ .သူက ရုပ်ရှင်သွားကြည့်မယ်ပြောလာတာနဲ့ လေပြေလည်းလိုက်ပို့ပေးပါတယ် ရုပ်ရှင်ရုံရောက်တော့ သူကပဲလက်မှတ်ဝယ်တယ် .လေပြေ့ဘ၀မှာ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ခါမှ ဒီလိုမကြည့်ဖူးပါဘူး..အခုကျတော့လည်း သူ့ကို မျက်စောင်းလေးတစ်ချက်ထိုးရုံကလွဲပီး ဘာမှကိုပြန်ပီးတော့ မပြောမိပါဘူး ရုပ်ရှင်ရုံထဲဝင်လာတော့ လေပြေ့ရင်တွေပေါက်ကွဲမတတ်ကို ခုန်နေတယ် .ရုပ်ရှင်က အင်္ဂလိပ်ကားလေ ချစ်ခန်းလေးတွေနည်းနည်းပါတယ် အဲ့အခန်းရောက်ရင်လေပြေ့စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခုကိုလိုသလိုပဲ တောင့်တနေသလိုပါပဲ သူကလည်းအလိုက်သိရှာပါတယ် လေပြေ့ရ့ဘဲ က်ကို ခေါင်းလေးလှည့်လာပီးတော့ ပါးလေးကိုအသာလေးနမ်းလိုက်တယ် လေပြေရှက်လိုက်တာနော်သူကပြောတယ်
“မ..ရယ် ..ချစ်မိနေပီကွယ်.” ဆိုပီးတော့ သူက လေပြေ့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးကိုလာပီးတော့နမ်းတယ်လေပြေလေ ဟိုးအဝေးတစ်နေရာကိုရောက်သွားသလိုပဲ .သူ့ရ့လဲ က်တေကွ အငြိမ်မနေပါဘူး လေပြေ့ရဲ့နို့တွေကို ဖွဖွလေးကိုင်ပီးတော့ ကစားပေးနေတယ် လေပြေလည်း ချစ်တော့ သူ့ရဲ့နှုတ်ခမ်းလေးကို ပြန်ပီးနမ်းပေးတယ်..သူ့ရ့လျှဲာလေးက လေပြေ့ရဲ့ပါးစပ်လေးထကဲို တိုးဝင်ပီးတော့ အထဲမှာရှိတဲ့ လေပြေ့ရ့လျှဲာလေးကို လာပီးတော့ကလိတယ် လေပြေ့စိတ်ထဲ ဖော်ပြမရတဲ့ ဖီး လေးခံစားလိုက်ရတယ် လေပြေသူ့ရ့လျှဲာလေးကို ပြန်ပီးတော့ထိကြည့်လိုက်တယ် သူကလေပြေ့လျှာလေးကို စုပ်တယ် လေပြေလည်း သူ့လျှာလေးကို ပြန်ပီးစုပ်တယ် ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ အသက်ရှူသံတွေက ပြင်းနေတယ် သူလေ လေပြေ့ရဲ့လက်ကလေးကိုကိုင်ပီးပုဆိုးအောက် သူ့ဟာကြီးပေါ်မှာ တင်ပေးလိုက်တယ် ဟယ်တော့ ကြီးကြီးပဲ .မာလိုက်တာလည်းမပြောပါနဲ့သူက လေပြေ့လက်ကလေးကို ကိုင်ပီးတော့ အထက်အောက်ပွတ်သလိုလုပ်ပေးနေတယ် သူ့လက်ကလေးလွှတ်လိုက်ပေမယ့် လေပြေဆက်ပီးတော့.. ကစားပေးနေလိုက်တယ် သူ့ရဲ့အနမ်းတေကွပိုပီးတော့ ပြင်းထန်လာတယ် ဆက်ပီးသူ့ရ့လဲ က်ကလေးက လေပြေ့ရဲ့ ထဘီလေးပေါ်ကနေ လေပြေ့ရတနာလေးပေါ်ကိုရောက်လာတယ် ထဘီလေးထဲကိုလက်လျှိုပီးတော့လေပြေ့ရဲ့အစိလေးကို ပွတ်ပေးနေတယ်လေပြေ့ပါးစပ်က“အင်း” ဆတို့ဲအသံလေးထက်ွသွားတယ်လေပြေလေ တစ်ခုခုကိုအရမ်းတောင့်တနေပီ အရမ်းလည်းကောင်းနေပီအ့ဒဲါနဲ့..သူ့ရ့ဟဲာကို မြန်မြန်လေးကစားပေးမိတယ်လေပြေ့ရဲ့လက်ကလေးနွေးကနြဲဖစ်သွားတယ်
သူ့ရ့သဲုတ်ရည်တွေေ လပြေ့လက်ပေါ်လာပေတယ် လေပြေ့ရဲ့ရတနာလေးလည်းစိုရွှဲနေပါပီ လေသူကလေပြေ့နှုတ်ခမ်းလေးကိုတစ်ချက်နမ်းလိုက်တယ် လေပြေ့လက်မှာပေနေတဲ့အရည်တေကွို သူ့မှာပါလာတဲ့.. တစ်ရု လေးနဲ့သုတ်ပေးတယ်လေပြေတို့နှစ်ယောက်အ၀တ်စားတွေသေချာ ပြန်ဝတ်လိုက်တယ်ဝတ်လည်းပီးရုပ်ရှင်လည်း ပြီးတဲ့ စာသားထိုးတာပါပဲ သူလေလေပြေ့ရဲ့ လက်ကလေးကို ကိုင်ပီးတော့ ရုပ်ရှင်ရုံထဲက ထွက်လာတယ် . လေပြေလည်း သူ့လက်ကလေးကို မြဲမြဲကိုင်ထားတယ် ချစ်လိုက်တာနော်.တက်ဆီငှားတယ် .ပီးတော့ သူ့နေတ့တဲိုက်ခန်းလေးကို သွားကြတယ် ..လေပြေသိတယ်ဘာဖြစ်တော့မလဲဆိုတာကို ဒါပေမယ့်လည်း . မလွန်ဆန်နိုင်ပါဘူး .. သူ့ကိုချစ်တာကိုး .ကားထမှဲာ သူ့ရဲ့ ပုခုံးလေးကို မှီထားရတာ အရမ်းနွေးထွေးတာပဲ .. “ဟိန်း လေပြေ့ကို ချစ်လား”“အရမ်းချစ်တယ် မ ရယ် .”အ့စဲ ကားလေးန့တဲ င် .. လေပြေကျေနပ်ပါပီ .. ဒီလိုနဲ့ပဲ တိုက်ခန်းရောက်လာတာပေါ့ ..တိုက်ခန်းရောက်တော့ ..သူလေ လေပြေ့ရဲ့ နောက်ကျောဘက်က နေ သိုင်းဖက်လိုက်တယ် ပီးတော့ လေပြေ့ရဲ့ နားရက်ွလေးတေကွို သူ့ရဲ့သွားလေးနဲ့ ဖွဖွလေး ကိုကတ် ယ် ပီးတော့ နားထင်လေးကို ဖွဖွလေးနမ်းတယ် လေပြေနောက်ပြန်လေးလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သူလေလေပြေ့ရ့နှဲုတ်ခမ်းလေးကို ဖဖွွေ လးနမ်းတယ် . နမ်းရင်းနဲ့ သူ့ရဲ့လက်တွေက လေပြေ့ရဲ့ .အကျီင်္ပေါ်ကနေ နို့လေးတွေကို ကိုင်ပီးတော့ နယ်ပေးနေတယ် လေပြေ့ရဲ့ အကျီင်္လေးထဲကိုလက်လျှိုပီးတော့ ဘရာစီယာလေးကို ဖြုတ်လိုက်တယ်
.လေပြေမခံနိုင်တော့ဘူးကယ်ွလေပြေ့ရဲ့ ထဘီလေးကို ချွတ်လိုက်တယ် . ပင်တီလေးပဲကျန်တော့တယ် ပင်တီလေးပေါ်ကလေး သူကလက်ကလေးနဲ့ ပွတ်ပေးတယ်. လေပြေတွန့်သွားတာပဲ ပင်တီလေးကို သူက ချွတ်လိုက်တယ် လေပြေလည်း ချွတ်ရလွယ်အောင်ခါးလေးကို ကော့ပေးထားလိုက်တယ်.ကျွတ်သွားပီ အမွှေးလေးတွေနဲ့အတူ . လေပြေ့ရဲ့ရတနာလေးက သူ့ကိုစိန်ခေါ်နေတယ် သူလေ.. လေပြေ့ရဲ့ အစိလေးကို လက်ကလေးနဲ့ပွတ်ပေးတယ် ပီးတော့ သူလေ ငရဲကြီးမှာမကြောက်ဘူးလားမသိဘူး လျှာလေးနဲ့လေပြေ့အစိလေးကို လျက်တယ် လေပြေရဲ့ပုံစံကလေကုန်းပေါ်ရောက်နေတဲ့ ငါးလေးလိုပဲဖျတ်ဖျတ်ကိုလူးနေတာပဲ သူ့ရ့လျှဲာလေးက လေပြေ့ရဲ့ အက်ကွဲကြောင်းလေးကြားထဲမှာ အထက်အောင် ပြေးနေတယ်လေပြေမခံနိုင်တော့ဘူးဟိုးအဝေးကိုလွင့်ထွက်သွားသလိုခံစားလိုက်ရပီးတ့ေဲ နာက်မှာတော့ လေပြေ့ရတနာလေးထဲကနေ အရည်တွေရွှဲပီးတော့.လေပြေတစ်ခေါက်ပီးသွားပါတော့တယ်.သိပ်ချစ်ရတာပဲ သူရယ်သူရဲ့ အနူးအနှပ်တြွေကားထမှဲာ လေပြေသာယာနေပေမယ့်လည်း လေပြေ့စိတ်ထဲမှာအလိုမပြည့်သေးပါဘူး . တစ်စုံတစ်ခုကို တောင့်တနေဆဲပါပဲ . သူကလည်း သိနေတယ် သူ့ရ့ပဲုဆိုးကို ချွတ်လိုက်တော့ အနည်းငယ်တောင်မတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ သူ့ရဲ့ဟာကြီးကိုလေပြေတေ့လွိုက်ရပါတယ်. လေပြေ့စိတ်ထဲမှာ ကိုင်ကြည့်ချင်စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့ .သူ့ဟာကြီးကို ကိုင်လိုက်ပီးတော့ . ရုပ်ရှင်ရုံထဲကလိုပဲ ဂွင်းတိုက်ပေးလိုက်တယ် ..သူ့ရ့မျဲက်နှာကို ကြည့်လိုက်တော့ သူအရမ်းကောင်းနေမှန်း လေပြေသိတာပေါ့ ..
ဒါနဲ့ လေပြေလည်း မြန်မြန်လုပ်ပေးလိုက်တော့ သူက ပြောတယ် . “မရပီရပီ ဒီမှာ ထွက်သွားလိမ့်မယ် အခုမထွက်ချင်သေးဘူး.. မ ရဲ့”“အင်းပါ ဟိန်းရဲ့ လေပြေ့ကို လုပ်ပေးပါတော့နော်.”သူက လေပြေ့ကို အသာလေးဆွဲလှဲလိုက်ပီးတော့ . လေပြေ့ပေါင်ကြားလေးမှာနေရာဝင်ယူလိုက်တယ်သူ့ဟာကြီးကို ကိုင်ပီးတော့ လေပြေ့ရဲ့ ဟာလေးကို မသွင်းသေးပဲ အထက်အောင်ပွတ်နေတော့ လေပြေ့အပေါက်ထဲဝင်အောင် လေပြေ ကော့ပေးလိုက်တယ် သူလည်း အပေါက်မှာတေ့ပီးတော့ ..အသာလေးထည့်လိုက်တယ် နာလိုက်တာရှင်ဒါတောင် ထိပ်ဖျားလေးပဲ ၀င်သေးတာ ..လေပြေ့ဟာလေးတစ်ခုလုံး ပြည့်နေတာပဲရှင်ဒါကိုသူကလေ . ဆက်ပီးတော့ ထိုးထည့်လိုက်တော့.လေပြေ့ပါးစပ်က အင့် ဆိုတ့အဲ သံလေးတောင်ထွက်သွားတယ်. သူက ဖြေးဖြေးမှန်မှန်လေးလုပ်ပေးတော့လေပြေလည်းတဖြေးဖြေးကောင်းလာတော့တာပဲ သူတစ်ချက်တစ်ချက်သွင်းလိုက်တိုင်းလေပြေ့ရဲ့ခါးလေးကိုလည်း ကော့ပီးတော့ နေပေးတတ်ပီ. အချက် ၃၀ လောက်လုပ်လည်းပီးရော . လေပြေတစ်ခေါက်ပီးသွားတာပေါ့ရှင်..သူက လေပြေ့ရဲ့ နှုတ်ခမ်လေးကို စုပ်နမ်းပေးရင်းနို့လေးတွေကိုပွတ်ပေးတယ် “မ ကောင်းရ့လဲားဟင်.” “အင်းဟိန်းရဲ့ . မ လေ အရမ်းချစ်သွားပီကွယ်”အ့လဲိုပြောရင်း သူ့ရ့နဲ ည်းနည်း အရှိန်သေသွားပီဖြစ်တဲ့ သူ့ရဲ့ဟာကြီးကို ကိုင်ပီးပွတ်ပေးလိုက်တော့လေပြေ့လက်ထဲမှာတင်.ပြန်ပီးတော့ အဆမတန်ကြီးထွားလာပါတော့တယ်
“အဲဟိန်းဟာကြီးကနော်..တစ်ခေါက်ပီးသွားတာတောင်.. ပြန်မာလာပြန်ပီဟွန့်”“မကလည်းမ၀သေးလုိ့နေမှာပေါ့” သူက ပြုံးပီးတော့ပြောတယ် “မကျနော့်ကို လေးဘက်ထောက်ပီးတော့ ကုန်းပေးပါလားဟင်..”လေပြေလည်းသူ့အလိုအတိုင်းလေးဘက်ထောက်ပီးတော့ကုန်းပေးထားလိုက်တယ်..သူက လေပြေ့ခါးလေးကိုအသာလေးညွှတ်ပီးတော့.နောက်မှာနေရာဝင်ယူလိုက်တယ်.ပီးတော့ နောက်ကနေ သူက လေပြေ့ဟာလေးကို လက်လေးနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ထိုးပေးလိုက်တော့လေပြေ့ကိုယ်လေးလည်း တွန့်သွားတာပေါ့ အဲ့ဒီတော့မှ သူ့ရ့ေဲ တာင်မတ်နေတ့ဟဲာကြီးကို ကိုင်ပီးတော့ လေပြေ့ရတနာလေးထဲကို သွင်းလိုက်တော့တယ်အစတော့ ဖြေးဖြေးမှန်မှန်လေးပေါ့ . နောက်တော့ တဖြေးဖြေး သူက ခပ်မြန်မြန်လေးလုပ်တယ် လေပြေ့ရ့ခဲါးကျင်ကျင်လေးကိုသူက ကိုင်ပီးတော့ .. အသားကုန်ကို ကြမ်းနေတော့တာပါပဲ ..လေပြေလည်း အားမရလို့ ဖင်ကိုနောက်ကိုကော့ကော့ပေးနေမိတယ်. အရမ်းကောင်းနေပါပီရှင်“ဟိန်းလေပြေ့ရ့နဲို့ကြီးတေကွိုကိုင်ပီးတော့ .. .. ခပ်ကြမ်းကြမ်းလုပ်ပါကွယ်.”သူကလည်း လေပြေ့နို့လုံးလုံးမို့မို့ကြီးတွေကို ကိုင်ပီးတော့ ..တရစပ် ထိုးစစ်ဆင်ပါတော့တယ် ဆက်တိုက် အချက် ၂၀ လောက်လုပ်ပီးတ့အဲ ချိန်မှာတော့..“ဟိန်းမ.. ပီးတော့မယ်ထင်တယ်. မရပ်နဲ့တော့.နော်..”
“ဟုတ်.အားးးးးး မ. ကျနော်ထွက်ပီ. မရတော့ဘူး.” ဆိုပီးတော့ သူ့ရဲ့ သုတ်ရည်နွေးနွေးတွေကိုလေပြေ့ရဲ့ ဟာထကဲို ပန်းလွှတ်လိုက်ပါတော့တယ်. ပီးတော့ လေပြေ့ရဲ့နှုတ်ခမ်းလေးကို .စုပ်နမ်းလိုက်တယ် “မအရမ်းချစ်တယ်.ကျနော် မန္တလေး ပြန်ချင်တော့ဘူးဗျာ မ နဲ့ပဲ အမြဲနေချင်လိုက်တယ်.”“ဟဟဟိန်းရယ် မ .. မကြာခဏ လာခဲ့မှာပေါ့ကွ. မ ရဲ့ဒေါ်လေးတို့မန်းလေးမှာရှိတယ်လေ”“ဒါဆို အဆင်ပြေတာပေါ့ မ ရဲ့ ”တစ်ယောက်န့တဲ စ်ယောက်ဖက်ထားရင်း စကားလေးတွေပြောရင်း ကြည်နူးနေကြတာပေါ့ .. ပီးတော့နောက်ထပ် ၃ ချီလောက်ထပ်ပီးတော့ လုပ်ဖြစ်ကြသေးတယ်ရှင့် ဒါတောင် သူမောနေမှာစိုးလို့လေပြေက ခံရတာ ၀ ကို မ၀သေးဘူး . ဒီအချိန်မှာ စာဖတ်နေတဲ့သူတွေထဲကလုပ်ချင်သပါ့ဆိုပီး. ရောက်လာရင်ဘာမှပြောဘူးနော်. အလကား ပါရမီ ဖြည့်ပေးလိုက်မှာရှင့်.ဒီလိုနဲ့ လေပြေက မန္တလေးသွားပီးတော့ . ဟိန်းဆီသွားလိုက် ..ဟိန်းက မန္တလေးက နေ ရန်ကုန်ကို လာလိုက်နဲ့ . တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်ရည်လူးကြတာပေါ့ ..
အဲ့ဒီ့နေ့လေးတွေဟာ လေပြေ့အတွက်တော့ ..မေ့မရခ့တဲာတော့ အမှန်ပါပဲလေ .. ဒီလိုသာယာလှပနေတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ ဘ၀ကိုဖျက်ဆီးခ့တဲာကတော့ .ဟိန်းရဲ့ မေမေပါ . ဟိန်းကို နိုင်ငံခြားပို့ပစ်မယ်တဲ့ . လေပြေနဲ့ ချစ်သူဖြစ်နေတာသိသွားလို့တဲ့ တကယ်ဆိုရင် လေပြေလည်း ..မိကောင်းဖခင် သားသမီးပါရှင် .. သူတို့က တစ်ဖက်သတ် အဲ့လိုလုပ်သွားတော့ .လေပြေတို့ဘက်က ခံရခက်တာပေါ့ရှင် ဟိန်းကတော့ လေပြေ့ကို ဖုန်းဆက်တယ် မန္တလေးလာခ့ပဲါလားတဲ့. လေပြေ့ကို မသွားခင်လေး နှုတ်ဆက်သွားချင်တယ်တဲ့ ..သူက ရန်ကုန်လာလို့မရလို့ပါတဲ့.. သူ့ကို သိပ်ချစ်တော့လည်း လေပြေ မန္တလေးလာခ့တဲာပေါ့ သူရ့ခဲါးလေးကို ဖက်ပီးတော့ .ဆိုင်ကယ်ပတ်စီးကြတာ ပျော်လိုက်တာ. ပီးတော့ ကန်တော်ကြီးဘက်သွားထိုင်ပီးတော့ စကားတွေပြောတယ် ..“မမကိုလေ ကျနော်အရမ်းချစ်တာ သိတယ်ဟုတ်”“မ လည်း ဟိန်းကို အရမ်းချစ်တယ်.” “မ ကျနော်လေ နိုင်ငံခြားက ပြန်လာတ့အဲ ထိ စောင့်ပေးနိုင်မလား”သူအ့လဲိုပြောမယ်လို့ မထင်ထားခဲ့ ..“ဟိန်း အ့ေဲ ရာက်သွားရင် အသစ်တေ့သွားမှာပါကွာ မကို မေ့သွားမှာပါ ”“မ ရယ် မမေ့ပါဘူး ဘယ်တော့မှ ”လေပြေ့ရ့ပဲါးလေးကို တစ်ချက်နမ်းလိုက်တယ် အဲ့ကနေစပီးတော့ .လေပြေတို့ လမ်းခခွဲ့ြဲကတာခုဆိုရင် ၃ နှစ်တောင်ပြည့်တော့မယ် .ဒါပေမယ့် သူ့ကို စောင့်မြဲ စောင့်ဆဲပါ ။ (ပြီးပါပြီ)